सिक्टापछि भन्सार र राजस्वको भ्रष्टाचारमा अख्तियारको सुक्ष्म छानबिन | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २४ मंसिर २०७५, सोमबार २०:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदाताविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि अब अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार, कर र राजस्वका अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुविरुद्ध छानबिन गर्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले भन्सार र राजस्वका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको धेरै उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।
२०५८ मा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले राजस्व समूहका सहसचिवदेखि नायबसुब्बासम्म २२ जनालाई एकैपटक पक्राउ गरेका थिए । त्यसपछि १७ बर्षसम्म राजस्व समूहका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका नायबसुब्बादेखि महानिर्देशकसम्मले आफन्त र चिनेजानेका ब्यक्तिका नाममा जग्गाजमिन खरिद, ब्यापारिक मेस संचालन गरेको सूचना पनि अख्तियारमा पुगेको छ । जग्गाजमिनमा लगानी गर्दा पनि खुल्नसक्ने भएपछि पछिल्लो समयमा राजस्वका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचारको रकम सुनमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति लगानी भएपछि पछिल्लो समयमा नेपाली बजारमा सुनको अभाव भएको सूचना पनि अख्तियारले पाएको छ । स्रोतका अनुसार जग्गाजमिनको तुलनामा सुन घरमै राख्न सकिने भएकाले पनि सुरक्षित मानेर भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम त्यतातिर लगानी गर्न थालेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको छानबिन गर्न अख्तियारले सेल नै बनाएको छ । राजस्व समूह गठन नै भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले गरिएको भनेर सुरुमै विवाद भएको थियो । प्रकारान्तरले त्यही नै देखिएको छ । राजस्व समूहका खरिदार र नासुसँग नै अरब सम्पत्ति छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा लामो समय कार्यरुत रही गतबर्ष अवकाश भएका अधिकृत उद्धव राउतले भक्तपुरमा ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनेर ब्यवसाय नै सुरु गरेको उदाहरण नै काफी छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजस्व समूह नराख्ने नराख्ने पक्षमा टे«ड युनियनहरुले आवाज उठाए पनि सरकारले त्यसलाई सुनुवाइ गरेन । राजस्व समूहका कर्मचारीको अगाडि सरकार झुक्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेकै समयमा चुडामणि शर्माले कर फस्र्योट आयोगमार्फत् २१ अर्ब छुट दिंदा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार यसअघि नै मुद्दामा गइसकेको छ । राजस्व समूहमा चुडामणि शर्माहरु धेरै छन् । हेर्दा अति भद्र र इमान्दार देखिने बजेट महाशाखाका प्रमुख सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले नवराज तिमिल्सिना(होमनाथ) मार्फत उनको नाममा ब्यापारिक फर्म खोलेर भ्रष्टाचारबाट आर्जित करोडौं रकम लगानी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अधिकारी तातोपानी भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुँदा तिमल्सिनाल उनका भान्से थिए । पछि तिनै तिमल्सिनाको नाममा ब्यापारिक फर्म खोलेर अधिकारीले लगानी गरेका छन् । ब्यापारिक फर्म खोलेको ७–८ बर्षको बीचमा तिमल्सिनाको प्रगति २५–३० बर्ष ब्यापार गरेका ठूला ब्यापारीहरुको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । उनी हिमालय सीमापार ब्यापार संघको महासचिव पनि भएका छन् । तिमल्सिनाको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने त्यो सहसचिव अधिकारीसँग सोझै जोडिन्छ, तातोपानी रुटमा ब्यापार गर्ने एक ब्यापारीले भने, तातोपानी बन्द भएपछि रसुवाको नाकामा पनि तिमल्सिनाको दबदबा छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले ४ महिनाअघि न्यून बिजकीकरण गरी ल्याइएका ब्रान्डेड जुत्ताहरु लोड भएको १९ वटा कन्टेनर बरामद गरेको थियो । ती सामान पनि तिमल्सिनाकै थिए । २०५८ मा अख्तियारले पक्राउ गर्न खोज्दा भागेका भरत सुवेदी तातोपानी भन्सार प्रमुख हुँदा सहसचिव अधिकारी भन्सार अधिकृतका रुपमा गएका थिए । सुवेदीले नै उनलाई लगेका थिए । पछि उनी तातोपानी भन्सार प्रमुख भए । त्यसपछि उनी सहसचिव बढुवा हुनासाथ २०६९–०७० मा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भए । उनलाई अख्तियारबाट पदमुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीले नै राजस्वको महानिर्देशक बनाएका थिए । त्यसपछि लोकमान र निर्मलहरिको सेटिङमा रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट नवराज तिमल्सिनाहरुले एकछत्र तस्करीको लाइन चलाएर अरबौंका सामान आयात गरेको त्यतिबेलाको रजगज देखेका ब्यापारी बताउँछन् ।
ती ब्यापारीले त्यतिबेलाको तिमल्सिनाको चकचकीबारे भने–त्यतिबेला उनका कन्टेनरहरु लोकमान र निर्मलहरिको डरले कसैले पनि चेक गर्ने हिम्मत गर्दैनथे । जति र जे सामान ल्याए पनि तिमल्सिनाले जे ल्याएको भन्थे, त्यही लेखेर भन्सार शुल्क लिने गरिन्थ्यो । भित्र सुन र बहुमूल्य सामान ल्याए पनि कसैले पनि चेक गर्न आँट गर्दैनथे । आखिर अख्तियार र राजस्व अनुसन्धानका प्रमुखको सामान कसले छुने ? दस्तुरी समेत कर्मचारीले माग्ने हिम्मत गरेनन् ।
रसुवा भन्सारमा करिब अढाइ बर्ष कार्यरत केदार पनेरु पनि छानबिनको दायरामा छन् । उनको कार्यकालमा भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भई चीनबाट आयात हुने सामान रसुवा भन्सारबाटै भएको थियो । उनको अढाइ बर्षे कार्यकालमा उनी र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातका भाइ श्याम बस्नेत मिलेर न्यून बिजकीकरण गरी करोडौं रुपैयाँ कमाएको स्रोत बताउँछ । पनेरुको कार्यकालमा रसुवा भन्सारबाट १५ लाख भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने कन्टेनरको न्यून बिजकीकरण गरी बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर अरबौं रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो ।
सहसचिव अधिकारीदेखि बिराटनगर भन्सारका हालका प्रमुख मिमांस अधिकारी, पूर्व भन्सार प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेत, भैरहवा भन्सारका प्रमुख भूपाल श्रेष्ठ, बीरगंज भन्सारका पूर्व प्रमुख सेवन्त आचार्य, रसुवा भन्सारमा बसेका भन्सार अधिकृत श्याम बस्नेत, लक्ष्मण बाँस्तोला लगायतका कर्मचारीको अकूत सम्पत्तिमा पनि अख्तियारले सुक्ष्म छानबिन गरिरहेको छ । (समाचारका केही अंश आजको साँघु साप्ताहिकबाट)
ओली सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का, सरकारको निर्णय एकपछि अर्को उल्टाउँदै
काठमाडाैं । असार २० मा केपी ओली नेतृत्वको सररकारले गरेका निर्णय सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । १४ भदौ ०७४…
कांग्रेसले भाेलीलाइ किन बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ?
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरेको छ ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल…
काठमाडौ । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी फेरि सञ्चालन दिने तयारी गरेको छ। पुराना सवारीसाधनले दुर्घटना र प्रदूषण बढाएपछि…
जनकपुरधाम । बालिका बलात्कारको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका ६ निवासी ४० बर्षीय सियाराम…
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति…
बुढीगण्डकीको क्षमता घटाइदैछ ?
काठमाडौं । सरकारले मुआब्जा वितरणमा बढी पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलाई नडुबाइकन बुढीगण्डकी जलविद्युत्…
प्रहरीकाे फरार सूचीमा गायिका आस्था, अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न अनुमति7views